Amidin’ny VJ Amin’izay Ireo Trano ao Brooklyn
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Chichewa Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Kirundi Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tiorka Tseky Yorobà Éwé
7 DESAMBRA 2015
NEW YORK—Amidin’ny Vavolombelon’i Jehovah ny sasany amin’ireo trano be mpitady indrindra ao Dumbo sy Brooklyn Heights any Brooklyn, any New York. Efa nanomboka ny dingana mifandray amin’ny fivarotana ny 85 Jay Street. Anisan’ny tany lehibe tsy misy trano ao Brooklyn io tany io. Efa manomboka koa ny fivarotana an’ilay trano misy rihana sivy ao amin’ny 124 Columbia Heights, sy ilay misy ny foiben’izy ireo ao amin’ny 25/30 Columbia Heights. Ny Watchtower Real Estate Office no mikarakara ny fivarotana an’ireo trano telo ireo, ary hamidy tsirairay izy ireo.
Hoy i Richard Devine, mpitondra tenin’ny Vavolombelon’i Jehovah, momba an’ilay tany 12 542 metatra toradroa ao amin’ny 85 Jay Street: “Antonona tranobe iray ilay tany, sady ao amin’ny Dumbo no misy azy, 93 000 metatra toradroa ny velaran-tany azo anorenana eo aminy.”
Eo akaikin’ny Tetezan’i Manhattan, eo amin’ny Dumbo, no misy ny 85 Jay Street.
Azo itsangantsanganana sady be mpitia ilay toerana manan-tantara misy an’ilay trano 124 Columbia Heights, any Brooklyn Heights. Trano fonenana izy io ary mirefy 14 121 metatra toradroa. Hoy Atoa Devine: “Tazana tsara avy eny ny Tetezan’i Brooklyn, ny Statue de la Liberté, ary Manhattan Ambany.”
Any Brooklyn Heights, toerana manan-tantara, no misy ny 124 Columbia Heights.
Efa am-polony taona ny foiben’ny Vavolombelon’i Jehovah no tao amin’ny 25/30 Columbia Heights (sary eny ambony indrindra). Ilay soratra hoe Watchtower sy ilay famantaranandro eo aminy no tena ahafantaran’ny mponin’i New York azy. Mirefy 68 098 metatra toradroa ilay toerana ary antonona tranobe roa. Tazana avy eo ny Tetezan’i Brooklyn, ary tsy misy manakona azy mihitsy.
Hoy Atoa Devine, momba ny tanjon’ny Vavolombelon’i Jehovah: “Amidy ireo trano sy tany ireo mba hahafahana mamindra ny foibe any Warwick, New York.”
Jereo ilay tranonkala www.watchtowerbrooklynrealestate.com raha mila fanazavana fanampiny ianao. Miresaha amin’ny Biraon’ny Filazam-baovao raha te hanadihady sy haka sary ianao.